Ko Social Media inogona kubatsira bhizinesi kusvika pakakwirira here? - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Inogona here Social Media kubatsira bhizinesi kusvika nharaunda dzakakwirira?
siyana evanhu vezvenhau Mapuratifomu vari kupa mukana we bhizimisi varidzi kuti vataurirane zvakananga nevashandisi vekupedzisira uye vangangove vatengi. Izvi zvinobatsira mukushambadzira kwepamhepo kwemabhizinesi uye zvinobatsira mabhizinesi kukura mberi. evanhu vezvenhau network inopa chikuva chakasimba chekushambadzira zvigadzirwa / masevhisi ekambani. Inoita sechikuva chikuru chekushambadzira kweakasiyana bhizimisi zvigadzirwa uye portfolio.
Kubatsira kweSocial Media:
Kukurukurirana kuri nani nevatengi:
Social Media inogonesa mukutanga kutaurirana kuri nani nevatengi vachishandisa maforamu, katsi, online marketing uye nevamwewo
evanhu vezvenhau inobatsira mukuchengetedza mutengo sezvo munhu asingafanire kubhadhara imwe yekusimudzira kuburikidza nayo.
Inobatsira pakuisa mhando nekumisikidza zita rechiratidzo mumusika
Yechokwadi-nguva kugutsikana kwevatengi
Inopa yakakwana kugutsikana kwevatengi nekuvapa iwo masevhisi mune chaiyo-nguva
Inobatsira mukutungamira chizvarwa nekukumbira kubvunza pamhepo kubva kune vangangove vatengi
evanhu vezvenhau kushambadzira kunotungamirira kuwedzera rokutengesa uye inotungamira, yakawedzera ruzivo rwemhando uye nekunatsiridza kutaurirana nevaripo uye vangangove vatengi.
Iri kubatsira mabhizinesi kusvika pakakwirira nekuona nzvimbo yemhando yemasangano mumusika wemakwikwi. Kuti uite izvi, bhizimisi masangano ari kushandisa evanhu vezvenhau sechishandiso chekunangisa vateereri chaivo uye kukwezva vangangove vatengi.
Social media inoita basa rakakosha mukuzivisa zvigadzirwa zvitsva kana masevhisi echero bhizimisi sangano. Inoshanda senzira yakanakisa kuita kuti vanhu vazive nezve kutangwa kwechigadzirwa chitsva kana sevhisi. Kwete kukanganwa, basa re evanhu vezvenhau mukuwana mhinduro yemutengi inova ndiyo chiyero chekuvandudza mune chero bhizimisi yakasimba. evanhu vezvenhau batsira bhizimisi kusvika pakakwirira. Zvisinei, zvakasiyana-siyana zve evanhu vezvenhau inoda kuongororwa kubatsira mabhizinesi kuwedzera.